Lathe Machine Intshayelelo
Umatshini we-Lathe lolona hlobo lusetyenziswa ngokubanzi lwesixhobo somatshini kwimveliso yoomatshini. Umatshini we-lathe account malunga ne-20% -35% yenani lilonke lezixhobo zomatshini. Isebenza ikakhulu ngokujikeleza okujikelezayo (iisilinda zangaphakathi nezangaphandle, umphezulu odibeneyo, imilo ejikelezayo ejikelezayo, njlnjl.) Kunye nendawo yokuphela yemizimba ejikelezayo. Ezinye iilethi zinokuqhubekeka ngokujonga imiphezulu.
Izixhobo ezisetyenzisiweyo kwi-lathe ikakhulu zizixhobo ze-lathe. Zingasetyenziselwa ukwenza imingxunya enje ngee-drill, i-reaming drill, iimela zokulahla inkunkuma, kunye nezixhobo ezinomsonto ezinje ngeetephu kunye namazinyo epleyiti.
Tyei-lathe yesinyithiunoluhlu olubanzi lobuchwephesha. Inokuqhubekeka ezininzi iintlobo zomhlaba, ezifana nesilinda yangaphakathi nangaphandle, ikhowuni, umjelo weringi, owenza umphezulu ojikelezayo, isiphelo sendiza kunye nemisonto eyahlukeneyo. Inokumba kwakhona, ikhulise, thelekisa imingxunya kunye ne knurl. Umgangatho oqhelekileyo onokucwangciswa kwelebhu ethe tyaba uyaboniswa kumzobo.
Eyona ntshukumo iphambililathe injiniyintshukumo yokujikeleza kokuluka, kwaye intshukumo yesondlo kukuhamba komgama kwesixhobo. Ukutya kudla ngokuvakaliswa kukuhamba kwesixhobo ngentonga yokuluka, kwi-M / R. Xa ujika imisonto, inye kuphela into eshukumayo esentloko, oko kukuthi, isindululo sokujija, esinokubola sibe kukujikeleza kokujikeleza kokujikeleza kunye nokuhamba kwesixhobo. Ukuba ufuna ukuqhubekeka ngentambo ngokukhawuleza, okanye unenani elikhulu lezinto zokusebenza ekufuneka zenziwe ngobunzima emva kokoI-CNC yentsimbi yokufaka umbhobholukhetho olulungileyo. Ukongeza, kukho iintshukumo ezincedisayo eziyimfuneko kwi-lathe. Umzekelo, ukuze kuqhubekekiswe uboya kubungakanani obufunekayo, i-lathe kufuneka nayo ibe nesindululo sokusika (isindululo sokusika sihlala sijolise kwicala lokuhamba kwesondlo, kwaye umsebenzi uhambisa umnini wesixhobo ngesandla kwi-lathe ethe tyaba) . Eminye i-lathes ikwanokuhamba ngokukhawuleza okukhawulezayo kunye nokuhamba ngokulandelelana komnini wesixhobo.
Ipharamitha ephambili yelothe ethe tyaba bubuninzi obujikeleze ubungakanani bokusebenza elukhukweni, kwaye okwesibini bubude obuphezulu bomsebenzi. Ezi paramitha zimbini zibonisa ubuninzi bomda wobungakanani bento yokusebenza eyenziwe ngomatshini, kwaye ikwabonisa ubungakanani besixhobo somatshini, kuba iiparameter eziphambili zichonga ukuphakama kwe-axis ye-spindle ukusuka kuloliwe wesikhokelo somzimba we-lathe, kunye Iiparamitha zesibini eziphambili zichonga ubude bebhedi yelitha.
Lathe Tye ikakhulu iinkqubo iinkqubo ezahlukeneyo asi, emkhonweni kunye iindawo disk. Ubume bayo bubonakalisiwe kulo mzobo, kwaye iqela lawo eliphambili lenziwe ngamacandelo amathathu.
Izinto ezibandakanya ibhokisi yokuluka, umnini wesixhobo, umsila, ibhokisi yesondlo, ibhokisi yesilayidi kunye nebhedi, njl.
Imilo lathe tyaba
2 umnini wemela
I-5 imilenze yokulala yasekunene
Ibha yokukhanya eyi-6
Ibhokisi ye-8 yokuhambisa
9 umlenze wasekhohlo
10 ibhokisi yokondla
Iindlela ezili-11 zokuxhoma ivili
Isihloko sentloko sigxunyekwe esiphelweni sasekhohlo sebhedi, kwaye ishafti ephambili kunye nendlela yokuhambisa isantya eguquguqukayo ifakwe ngaphakathi, kwaye indawo yokusebenza ibambekile kwisiphelo sangaphambili sokujija nge-chuck. Umsebenzi wentloko yentloko kukuxhasa ishafti ephambili kunye nokuhambisa amandla kwishafti ephambili ngendlela yokuhambisa isantya eguquguqukayo, ukuze ishafti ephambili iqhube indawo yokusebenza ukuze ijikeleze ngesantya esimiselweyo ukuze ifezekise eyona ntshukumo iphambili.
Isiphatho sesixhobo sibekwe kwisiphatho sesiphathi sebhedi kwaye singahanjiswa ixesha elide kuloliwe wesikhokelo. Icandelo lesiphathi sezixhobo linamalungu aliqela abaphathi bezixhobo. Umsebenzi wawo kukucofa isixhobo sokujika esingaphezulu, esisemva okanye sokuhamba kwesondlo se-oblique.
3. Umsila womsila
Umsila ubekwe kwisiphatho sesiphatho sebhedi kwaye unokuhlengahlengiswa ixesha elide ecaleni komgaqo kaloliwe. Umsebenzi wayo kukuxhasa indawo yokusebenza ende kunye nencam ephezulu, okanye ukufaka isixhobo sokwenza imingxunya njengokugoba okanye imela yokulahla inkunkuma kwimingxunya. Faka isuntswana kwi tailstock, I-workpiece inokugrunjwa ukwenza umsebenzi we-lathe njengomatshini wokugrumbaApha.
Ibhedi inyuswe kwimilenze yasekhohlo nasekunene kunye nemisebenzi yokuxhasa izinto eziphambili kunye nokugcina imeko echanekileyo yokuhamba okanye yokuhamba ngexesha lokusebenza.
5. Ibhokisi yesilayidi
Ibhokisi yesilayidi igxunyekwe emazantsi ephathi sesixhobo ukuhambisa isiphatho sesixhobo ndawonye kwicala lobude. Indima yayo kukugqithisa ibhokisi yesondlo kwibhari yokukhanya.
Isindululo esivela (okanye isikhombisi esikhokelayo) sidluliselwe kumnini wesixhobo, sivumela isiphatho sezixhobo ukuba siphumelele ukondla okude, ukutya okulandelayo, ukuhamba ngokukhawuleza okanye ukusinga. Ulonwabo luxhotyiswe ngeendlela ezahlukeneyo zokuzonwabisa okanye amaqhosha.
6. Ibhokisi yokutyisa
Ibhokisi yesondlo igxunyekwe kwicala lasekhohlo ebhedini, kwaye inendlela yokutya yokutshintsha indlela yokutshintsha ukutya kwe-motor feed okanye ukukhokelela kumsonto owenziwe ngomatshini.
Amanyathelo okusebenza kweLathe
1. Uhlolo ngaphambi kokuqhuba
1.1 Gcwalisa umzobo wegrisi ngomatshini ngegrisi efanelekileyo.
1.2 Jonga izibonelelo zombane zesebe ngalinye, isiphatho, izixhobo zokuhambisa, ukhuseleko kunye nokunciphisa izixhobo zigqibelele kwaye zithembekile.
1.3 Izixhobo nganye kufuneka ibekwindawo ekuyo, kwaye ibhanti kufuneka liqiniswe.
1.4 Umphezulu webhedi awuvunyelwe ukugcina ngokuthe ngqo izinto zesinyithi ukunqanda ukonakala kumphezulu webhedi.
1.5 Indawo yokusebenza eza kulungiswa, akukho santi inodaka, kuthintela isanti yodaka ekuweleni kwinqwelwana, kunye nokusila isiporo sikaloliwe.
1.6 Phambi kokuba umsebenzi uvalwe, uvavanyo olungenanto lwe-lathe kufuneka lwenziwe ukuqinisekisa ukuba yonke into iqhelekile ngaphambi kokuba ilayishwe loo msebenzi.
2. Iinkqubo zokusebenza
2.1 Xa indawo yokusebenza ilungile, qala impompo yeoyile yokuthambisa kuqala, ukuze uxinzelelo lweoyile lukwazi ukufikelela kwiimfuno zesixhobo somatshini ngaphambi kokuqala.
2.2 Xa uhlengahlengisa umphathi ophetheyo, xa ivili lihlengahlengiswa, umbane kufuneka unqunyulwe. Emva kohlengahlengiso, zonke iibholiti kufuneka ziqinisiwe, isikrufu kufuneka sisuswe ngexesha, kwaye umsebenzi wobugcisa kufuneka ususwe ukuze usebenze.
2.3 Ngokukhawuleza emva kokulayisha kunye nokothula i-workpiece, susa isitshixo esijikelezayo se-chuck wrench kunye ne-workpiece.
2.4 I-tailstock kunye ne-crank handle yesixhobo somatshini kufuneka ihlengahlengiswe kwindawo efanelekileyo ngokweemfuno zokulungisa, kwaye iqiniswe okanye icinezelwe.
2.5 I-workpiece, isixhobo kunye ne-fixture kufuneka zifakwe ngokukhuselekileyo. Isixhobo samandla esidadayo kufuneka sandise indawo yemela kwindawo yokusebenza ukuze uqalise umatshini.
2.6 Xa usebenzisa ifreyimu yeziko okanye isiphatho sesixhobo, iziko kufuneka lihlengahlengiswe kwaye lithanjiswe kakuhle kwaye lixhaswe.
2.7 Xa kusetyenzwa ngezinto ezinde, indawo ebonakalayo emva kokuluka ayifanelanga ukuba inde kakhulu. Ukuba inde kakhulu, isakhelo sokulayisha kufuneka sifakwe kwaye uphawu lwengozi kufuneka luxhonywe.
2.8 Xa usondla, imela kufuneka ibe kufutshane nomsebenzi ukunqanda ukungqubana; isantya sokuhamba kufuneka silingane. Xa utshintsha isixhobo, isixhobo kufuneka sibe kumgama ofanelekileyo ukusuka kwindawo yokusebenza.
2.9 Isixhobo sokusika kufuneka sibotshelelwe, kwaye ubude besixhobo sokujika ngokubanzi abukho ngaphezulu kwamaxesha ama-2,5 ukutyeba kwemela.
2.1.0 Xa kusenziwa izinto zobuchwephesha, kubalulekile ukuba ube nesilinganisi esifanelekileyo sokulinganisa iziko lomxhuzulane wesantya kunye nesantya sesithuthi kufanelekile.
2.1.1. Ukuba ikhadi lingaphaya komsebenzi ngaphandle kwe-fuselage, amanyathelo okhuseleko kufuneka athathwe.
2.1.2 Uhlengahlengiso lwesetingi yezixhobo kufuneka lucothe. Xa incam yesixhobo ingama-40-60 mm kude nendawo ekusetyenzwa kuyo, kufuneka kusetyenziswe ukutya ngesandla okanye endaweni yokusebenza.
2.1.3 Xa ubeka umsebenzi kunye nefayile, isiphatho sesixhobo kufuneka sirhoxiselwe kwindawo ekhuselekileyo. Umqhubi kufuneka ajongane ne-chuck ngesandla sasekunene ngaphambili kunye nesobunxele ngasemva. I-workpiece ene-groove ephambili kumphezulu ayivumelekanga ukuba yenziwe ngefayile.
2.1.4 Xa isangqa sangaphandle somsebenzi sikhazimlisiwe ngelaphu elirhabaxa, umqhubi uya kukhanyisa iincam zombini zelaphu elirhabaxa ngokokuma okuchazwe kwinqaku elingentla. Sukusebenzisa umnwe ukubamba ilaphu elirhabaxa ukupholisha umngxunya ongaphakathi.
2.1.5 Xa isixhobo sihamba ngokuzenzekelayo, isixhobo esincinci esiphathwayo kufuneka sihlengahlengiswe ukuze sigungxule ngesiseko ukuthintela isiseko ekubetheni i-chuck.
2.1.6 Xa usika imisebenzi emikhulu okanye enzima okanye yezixhobo, isibonelelo esaneleyo semishini kufuneka sishiywe.
3. Umsebenzi wokupaka
3.1 Cima umbane kwaye ususe indawo yokusebenza.
3.2 Isiphatho ngasinye siye sanqonqozwa sayokuma kwindawo ekuyo, kwaye izixhobo ziyacocwa kwaye ziyacocwa.
3.3 Jonga imeko yesixhobo ngasinye sokhuseleko.